Burmese vowel “e” (​ေ) is up-side-down of English “e” shape and isadependent vowel. Some people complained why voweleis behind the consonant in Unicode encoding. I tried to answered that it’s according to logical and linguistic approach foraBrahmi based script and it doesn’t affect on how we type the character sequences. But some really conservative and stubborn people keep saying that it’s not “Myanmar’s Way”. They think that Burmese script was invented by ancient genius Burmese last 2000 years ago. Geez!
Pallava family branches
Well, the more the resistant, the more the motivation I get to learn new things. Burmese language was originally based on Mon and Arakan scripts. Mon and Arakan scripts came from Grantha scripts which wasasouthern family of Brahmi script. Brahmi script was the origin of most of south and west Asian scripts.
As you can see in the image, vowelewas originally justamodifier to the consonant. All the vowels stayed on top of or below the consonants. People changed writing styles in time. Sometimes, when time passed, people started forgetting the origin of certain history. But in internet age, we can research and dig up easily when we couldn’t do it two decades ago.
Brahmi script 3rd century BC. The original form of vowelewas very simple,astick on top left side of consonant.
Vowel E for Indian Languages 2nd century -7th century AD. Vowelein all branches still maintained top left position.
Arakan Vowel "e" 2nd century - 6th century AD. The vowelewas clearly still on top and scripts were not very much different from original southern family Grantha
Pyu script 4th century - 6th century AD. Vowelewas still near to it's original form.
Pallava -aPyu equivalent script. Many of it's original shapes and forms were still maintained.
Pyu script proposal to Unicode by an individual. In Brahmi based script Unicode encoding models, all independent vowels stay behind consonant
Myazedi Inscription 12th Century AD. Finally, vowelewas completely moved in front of consonant.
Arakan Coins by U San Tha Aung, The Buddhist Art of Ancient Arakan by U San Tha Aung.
Tags: arakan, brahmi, burmese, consonant, history, language, mon, origin, pyu, rakhine, script, Unicode, vowel
Knowledge Is Power! Yes, It Is.
After I read this post of Saya ATK, I agreed most of it. But general conclusion such as “knowledge is not power anymore” cannot totally be accepted in my heart.
The earlier lines stated that “raw data” is “information” which I accepted. We can find them in libraries or online. Yes, today era is information age. Most people are able to access the mass information easily when we couldn’t imagine it two decades ago. Yet data stay as data unless we understand it and memorize it.
Another line stated that “collection of data for usefulness” is “knowledge” which I denied. And it stated that “understanding” is the next level of knowledge. In my little knowledge, knowledge itself is “understanding” through study or practices. Most of world renowned dictionaries define knowledge as understanding of certain thing. In English-Pali dictionaries, knowledge is defined as “paññā” (ပညာ), same as “wisdom” since their definitions are overlapping.
In Sanskrit, jñā can be translated as “consciousness”, “knowledge”, or “understanding”. Pra is an intensifier which could be translated as “higher”, “greater”, “supreme” or “premium”.
The article stated that “what, why, how and analysis ofacertain subject is wisdom. I would say it’s still the “knowledge”. The real meaning of “Wisdom” is the ability to judge what is wrong and what is right based on the knowledge, is what I understand.
The article defined knowledge as သညာသိ and wisdom as ပညာသိ. If that the case, I want to redefine it. သညာသိ – (jānāti) knowing in name without needing to understand it. ပညာသိ – (paññā) knowledge or knowing by understanding. And there is another one left, ထိုးထွင်းသိ – (ñāṇakaraṇa) enlightenment.
Enough with definitions, I will go back to my stand, ” knowledge is power”. With knowledge alone,acertain country could become powerful. A certain person can stand out among the crowd with his knowledge. But knowledge alone can turn to be evil. Wisdom is the ability to judge what is right based on the knowledge such as should we use nuclear power at wars. We cannot get wisdom without knowledge. Not everybody has the same knowledge just because they have the same internet connection or the same book.
So the differences in our stands are clearly based on how we define “knowledge” and “wisdom”.
Tags: article, atk, burmese, Myanmar, view
Email တွေ ဖော်ဝတ်လုပ်ရုံနဲ့ ကွန်ပျူတာ အလကားပေးမယ်လို့ သင်နည်းနည်းဖြစ်ဖြစ် ယုံနေရင်တော့ ကိုယ့်ခေါင်းသာ ကိုယ်တူနဲ့ ထုလိုက်ပါတော့။ ဒီလို Email မျိုးကို Hoax လို့ ခေါ်တယ်။ လူတွေကို မဟုတ်တာကို အဟုတ်ထင်စေတာမျိုး၊ ထင်ရုံနဲ့ မပြီးဘဲ လိုက်ပြီး Forward လုပ်ခိုင်းတဲ့ အီးမေးမျိုး။
တစ်ခုခုကိုအလကားရမယ်၊ ဒီမေးကို forward လုပ်ပေးပါ။ ဒီဗိုင်းရပ်စ်ဟာ အလွန်ပြင်းထန်တယ်၊ ကွန်ပျူတာတစ်ခုလုံး ပေါက်ကွဲသွားမယ်၊ လူတိုင်းကို အသိပေးပါ စသဖြင့် လာရင်တော့ ဒါတွေဟာ Hoax ရဲ့ သွင်ပြင်တွေပါပဲ။
တကယ်လို့ Email တစ်စောင်ဟာ Hoax လို့ သံသယရှိရင် Google မှာ ရိုက်ထည့်ပြီး ရှာဖွေ စစ်ဆေးကြည့်ပါ။ Hoax မှန်ရင် အလွယ်တကူ တွေ့ပါလိမ့်မယ်။Hoax ရဲ့သားကောင် အဖြစ်မခံပါနဲ့။ သူများတွေကိုလည်း Hoax နဲ့ အနှောင့်အယှက် မပေးမိပါစေနဲ့။
ဒီနေရာမှာ Hoax ဟုတ်မဟုတ် စစ်ဆေးနိုင်ပါတယ်။
ကဲ ခင်ဗျားတို့ပဲ စဉ်းစားကြည့်။ အဲ… စဉ်းစားကြည့်ဆိုလို့ အနားမှာတွေ့တဲ့ဟာကို ဓားနဲ့စဉ်းပြီး ကောက်စားမနေနဲ့အုံး။ ကျုပ်ပြောတာ ဂလိုပါ။
ဒီခေတ်ကြီးမှာ ငွေရှာရတာ ဘယ်လောက်ခက်တယ်ဆိုတာ ခင်ဗျားတို့အသိ။ နဖူးကချွေး ခြေမကျအောင် ရုန်းကန်နိုင်မှ ထမင်းနပ်မှန်အောင် စားရတာ မဟုတ်လား။ ကျုပ်ဆိုလည်း အဖေ့အိတ်ထဲက သွားနှိုက်နေတုန်း မိသွားလို့ မုန့်ဖိုးတစ်လ ဖြတ်ခံရတယ်လေ။ ဒီလိုဒီလို ခဲခဲယဉ်းယဉ်း ရှာထားရတဲ့ အဖိုးတန်ငွေတွေကို ဘာကိစ္စ ဘလော့ရေးရင်း အချိန်ဖြုန်းမတုန်း။ ဟုတ်တယ်မဟုတ်လား။
ဘလော့ရေးရတာ ခံစားမှုတွေကို ဖွင့်ချပစ်လို့ရလို့ ကြိုက်ကြပါသတဲ့။ လွတ်လပ်မှုရဲ့ အရသာကို ခံစားရပါသတဲ့။ ကဲ ဂလောက်တောင် လွတ်လပ်ချင်ရင်လည်း သုံးရာတန် မှတ်စုတစ်အုပ်ဝယ်ပြီး ရေးပေတော့ အသားကုန်။ ရော် ဒီလိုလည်း မဟုတ်ပြန်သေးပေဘူးတဲ့လား။ ကိုယ့်အပေါင်းအသင်းရောင်းရင်းတွေကို ခံစားချက်တွေ ဝေမျှပေးနိုင်လို့ ဆိုပဲ။ ကဲကဲ ဂလောက်တောင် ဝေမျှပေးချင်ရင်လည်း ရှစ်မိုင်တို့ လှည်းတန်းတို့သွားပြီး ဓာတ်တိုင်မှာ A3 နဲ့ကော်ပီကူးပြီး သွားကပ်ထားလိုက်။
မီးက မလာရတဲ့ကြားထဲ ရထဲ့အချိန်လေးမှာ ဘလော့က ရေးရအုံးမယ်။ ကဲ တခြား ဘာသွားလုပ်အုံးမလဲ။ ဘလော့ရေးဖို့ဆိုရင် ဘိုလိုရေးရင်လည်း ကောင်းကောင်းကန်းကန်း ရေးတတ်အုံးမှ။ ဗမာလိုဆိုလည်း စာလုံးပေါင်းတို့ သဒ္ဒါတို့မှားရင် အပြောအဆိုခံရအုံးမယ်။ မြန်မာစာကလည်း ရိုက်ရတာ ခက်လိုက်တာ လွန်ပါရော။ ခါတိုင်းရိုက်နေကျ ဘားဂလစ်ရှ်လေးပဲ ကောင်းပါတယ် နော့။
ဟော ဘလော့တစ်ခုတင်ပါပြီတဲ့။ ဗမာလို မမြင်ရတာနဲ့ စာလုံးတွေမပေါ်တာနဲ့ ခေါင်းကို နောက်ကရောပဲ။ ဘလော့တွေဝင်ကြည့်လိုက်။ ဘာတွေမှန်းကိုမသိဘူး။ ဘေးမှာ ပရိုဖိုင်တွေရော ဟစ်ကောင်တာတွေရော၊ လင့်တွေရော ကွန်းမန့်တွေရော ဟစ်စထရီတွေရော ရှုပ်နေတာပဲ။ ဒီကြားထဲ ဖောက်တောက်ဖောက်တောက်နဲ့ လှုပ်နေတဲ့ ပုံတွေ ယူကျုက ဗီဒီအိုတွေ ဟိုပြေးဒီပြေးစာတန်းတွေရော ဘာတွေမှန်းကို မသိဘူး။ ရှည်လျား ထွေပြား ရှုပ်ရှပ်ခတ် နေတာပဲ။
ဒီကြားထဲ ဆီပုံးဆိုတာ တစ်ခုက ထည့်ကြသေးတယ်။ ကိုယ်ရေးတာ သူများမမြင်မှာစိုးလို့ ငါးကြောင်းလောက် ကော်ပီကူးထည့်ရတာနဲ့၊ ကိုယ့်လင့်ကလေးကို လိုက်ကြော်ငြာရတာနဲ့ မျက်စိစပါးမွှေးလည်း စူးပါ့။ ကဲကဲ ပြောစရာတွေတော့ တပုံကြီးရှိသေးတယ်။ နေအုံး။ ဟိုမှာ မတ်စိတက်လာလို့ ချက်တင်သွားကျူလိုက်အုံးမယ်။